चीनले भारतीय भूमि मिच्दै बसाल्यो गाउँ, अब के गर्लान मोदी ? — Imandarmedia.com
चीनले भारतीय भूमि मिच्दै बसाल्यो गाउँ, अब के गर्लान मोदी ?
एजेन्सी। अमेरिकी रक्षा विभागको रिपोर्टले भारत–चीनबीचको विवादित क्षेत्रमा चीनले गाउँ बसाएको खुलासा गरेको थियो। भारतले यो गाउँ नै अवैध रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। यस कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने भारतले जनाएको छ।
शीले आफ्नो नेतृत्व स्थापना गर्नका लागि सबै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जे पनि हुनसक्छ । नी भन्छन्, ‘चीनको कुलिन राजनीति पारदर्शी छैन । र धेरैकुरा हामीलाई थाहा छैन ।’